एक सच्चा प्रेम: प्रेममा गरेको वाचा पुरा गर्न युवतीले गरिन् ला,ससँग विवाह ! - समृद्ध नेपाल
कहिले काही भनिन्छ यो संसार नै प्रेमकै कारण अडिएको छ भनेर । यदी प्रेम नहुदो हो त यो संसारको नै सृष्टि हुने थिएन होला । भनिन्छ प्रेम त्याग पनि हो । अनि सर्मपण पनि हो । सच्चा प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमका लागि केही न केही त त्याग गरेकै हुन्छ ।यस्तै एउटा उदाहरणा बनेकी छिन् एक थाइ युवती ।
नान थिप्हारटन नाम गरेकी उनले हृदयघातका कारण आफ्नो प्रेमीको मृत्यु भएपछि उनको लाससँगै विवाह गरेकी छिन्। यो खबर सन्दा पताईलाइ अचम्म लाग्न पनि सक्छ ।
प्रेमीको मृत्यु पश्चात् दाहसंस्कारको क्रममा उपस्थित भएकी उनले दाहसंस्कारकै क्रममा विवाह गरेकी हुन् । उनले आफले प्रेममा हुदाको समयमा बाचा कसम पुरा गर्नका लागि प्रेमीको शवसँग विवाह गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छिन् ।उनले आफ्नो मायाको समर्पणका लागि यस्तो गरेको बताउँदै भनिन् उनको लाससँग विवाह पश्चात् मेरो मनमा शान्ति छाएको छ ।
प्रेमी प्रतिको त्यागका लागि यस्तो गरेको बताउने उनी आफ्नो बाँकी जिन्दगी प्रेमीको सम्झनामा एक्लै बिताउने बताउँछिन्। खबरले आम प्रेमीहरुमा आश्चार्यमा पारेको छ । एजेन्सीको सहयोगमायो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लि,क गर्नुहोस
आज आमाको मुख हेर्ने दिनः पढ्नुहोस् मातृमहिमा !
न्युजिल्याण्डसम्म पुग्ने गरि अष्ट्रेलियाको जंगलमा लाग्यो डढेलो !
ट्याक्टरबाट लडेर उदयपुरमा ७ वर्षिय बालिकाको मृत्यु !
प्लास्टिकको चामल संगै प्लास्टिकको दुध पनि ( भिडियो सहित )
मनकारी महिला घरबेटीले कोठा खालि गर भनेपछि यी महिलाले आफ्नै जग्गामा बनाइदिने भईन घर !
बंगलादेशले पनि गर्यो नेपाल वारे यस्तो निर्णय !
रुसले बनाएको कोरोना खोपमा लगानी गर्ने नेपालको तयारी !